7 Mbola misy fiantraikany amin'ny fandaharana vaovao ankehitriny ny androany
Franklin Delano Roosevelt dia nitarika ny Etazonia tamin'ny iray amin'ireo vanim-potoana henjana indrindra teo amin'ny tantarany. Nianiana tao amin'ny birao izy satria ny Depression Lehibe dia nanamaivana ny fahantony teo amin'ny firenena. Olona amerikana an-tapitrisany no namoy ny asany, ny tranony, ary ny tahiriny.
Ny New Deal an'ny FDR dia andiam-panahin'ny federaly napetraka mba hamerenana ny fihenan'ny firenena. Ny fandaharan'asa Deal vaovao dia nametraka ny olona hiverina hiasa, nanampy ireo banky hanavao indray ny renivohiny, ary namerina ny firenena ho fahasalamam-bahoaka. Raha tapitra ny fandaharam-potoan'ny New Deal raha niditra tamin'ny Ady Lehibe II i Etazonia, dia mbola velona ihany ny sasany.
Ny FDIC dia manome antoka ny banky, miaro ny mpanjifa amin'ny tsy fahombiazan'ny banky. Getty Images / Corbis Historical / James Leynse
Teo anelanelan'ny 1930 sy 1933, banky teo amin'ny 9.000 Amerikana no nirodana. Nametraka $ 1.3 lavitrisa dolara ny mpamatsy Amerikana. Tsy vao izao no nialan'ny Amerikanina ny tahiriny nandritra ny fihenan-karena ara-toekarena, ary matetika ny banky no nanjavona imbetsaka tamin'ny taonjato faha- 19. Ny Filoha Roosevelt dia nahita fahafahana hamarana ny tsy fahazoana antoka ao amin'ny rafitra banky amerikana, noho izany dia tsy hijaly ireo fatiantoka mahatsiravina amin'ny ho avy ny mpandraharaha.
Ny Lalàna Bankin'ny taona 1933, fantatra amin'ny hoe Lalàna Glass-Steagall , dia nisintona banky ara-barotra tamin'ny banky fampiasam-bola, ary nanapaka azy ireo tamin'ny fomba hafa. Ny lalàna ihany koa dia nametraka ny Federal Deposit Insurance Corporation ho sampana tsy miankina. Ny FDIC dia manatsara ny fahatokisan'ny mpanjifa amin'ny rafitra banky amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fametrahana banky mpikambana ao amin'ny banky federaly, ny antoka izay mbola manome mpanjifa banky amin'izao fotoana izao. Tamin'ny taona 1934, sivy tamin'ireo banky misahana banky FDIC no tsy nahomby, ary tsy nisy mpametra-bola tao amin'ireo banky tsy nahomby ireo.
Ny fandaniana FDIC dia voafetra tamin'ny fametrahana hatramin'ny $ 2500. Androany, vola hatramin'ny 250 000 dolara no voaaro amin'ny fandrakofan'ny FDIC. Ny banky dia mandoa ny fiantohana fiantohana mba hiantohana ny fananan'ny mpanjifany.
Ny Fikambanana Federal Mortgage National, na Fannie Mae, dia fandaharanasa New Deal hafa. Getty Images / Win McNamee / Staff
Tahaka ny tao anatin'ny krizy ara-bola vao haingana, ny fitontongan'ny toekarena tamin'ny taona 1930 dia tonga teo an-tsenan'ny tranom-barotra am-baravaran'ny trano. Tany am-piandohan'ny governemanta Roosevelt, efa ho ny antsasaky ny karama amerikana rehetra no tsy lavorary. Nipoitra ny fananganana trano, nametraka ny mpiasa tamin'ny asany ary nanamafy ny firoboroboana ara-toekarena. Raha tsy nahomby tamin'ny banky an'arivony ny banky, na ireo mpindram-bola mendrika aza dia tsy afaka nindram-bola hividianana trano.
Ny Fikambanana Federal Mortgage National, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Fannie Mae , dia naorina tamin'ny taona 1938 rehefa nanasonia ny fanovana ny Lalàna nasionaly momba ny fambolena ny filoha Roosevelt (nandalo tamin'ny 1934). Ny tanjon'i Fannie Mae dia ny mividy fampindramam-bola avy amin'ireo mpampindram-bola tsy miankina, manafaka ny renivohitra mba hahafahan'ny mpandraharaha manefa ny fampindramam-bola vaovao. Nampian'i Fannie Mae ny famelomana ny tranomim-ponenana taorian'ny WWII tamin'ny alalan'ny famatsiam-bola ho an'ny GI an-tapitrisany. Androany, Fannie Mae sy programa mpiara-mitory, Freddie Mac, dia manana orinasam-pifandraisana an-tapitrisany amin'ny fividianana trano.
National Board Relations Board
Ny birao nasionaly momba ny asa momba ny asa dia nanamafy ny sendikan'ny mpiasa. Eto, ireo mpiasa dia mifidy mba hifaneraserana ao Tennessee. Departemantan'ny angovo / Ed Westcott
Ny mpiasa tamin'ny faran'ny taonjato faha- 20 dia nahazo dipoavatra tamin'ny ezaka nataony hanatsarana ny fepetra amin'ny asa. Tamin'ny faran'ny Ady Lehibe I , ny sendikan'ny mpiasa dia nitaky mpikambana 5 tapitrisa. Saingy nanomboka nanapaka ny karavasy tamin'ny taona 1920 ny fitantanana, nampiasana didy sy fihenam-bidy mba hampitsaharana ireo mpiasa amin'ny famonoana sy fandaminana. Mpikambana ao amin'ny sendika no nidina tamin'ny isa talohan'ny WWI.
Tamin'ny volana Febroary 1935, ny Loholona Robert F. Wagner ao New York dia nampiditra ny Lalàna National Relations Relations, izay hamorona sampana vaovao hanokanana ny zon'ny mpiasa. Nalefa ny Birao Nasionaly Momba ny Asa Fanaovan-gazety raha nanasonia ny Fitrandrahana Wagner tamin'ny Jolay tamin'io taona io ny FDR. Na dia nanohitra tamin'ny fomba ofisialy aza ny lalàna, dia ny lalàm-panorenana amerikana no nanapaka ny NLRB tamin'ny 1937.
Ny Firaisam-pirenena dia niditra an-tsehatra noho ny fianjeran'ny tsenam-bola tamin'ny 1929 izay nalefan'ny US ho tsizarizary ara-bola maharitra folo taona. Getty Images / Chip Somodevilla / Staff
Taorian'ny Ady Lehibe I, dia nisy ny famatsiam-bola amin'ny fampiasam-bola amin'ny tsenam-barotra tsy misy fepetra. Antenaina fa 20 tapitrisa ny mpampiasa vola no manonitra ny volany amin'ny securité, miezaka ny manankarena ary mahazo ny sombin-kaontin'ny vola 50 lavitrisa. Rehefa nikorontana tamin'ny volana Ôktôbra 1929 ny tsenam-bola, dia namoy ny volany ihany ireo mpampiasa vola ireo, ary koa ny fahatokisany tamin'ny tsena.
Ny tanjona lehiben'ny Securities Exchange Act tamin'ny taona 1934 dia ny hamerenana ny fahatokisan'ny mpanjifa amin'ny tsenan'ny securité. Ny Lalàna dia nametraka ny Kaomisionan'ny Securities and Exchange mba hifehy sy hanara-maso ny orinasam-pihariana brokerage, fifanakalozam-bola, ary ireo mpiasa hafa. FDR nanendry an'i Joseph P. Kennedy , ho filohan'ny filoha ho avy, ho filoha voalohany an'ny SEC.
Mbola eo amin'ny toerany ny SEC, ary miasa mba hahazoana antoka fa "ny mpampiasa rehetra, na ireo orinasa lehibe na olon-tsotra ... dia manana fahazoana fototra momba ny fampiasam-bola alohan'ny hividianana azy, ary raha mbola mitazona izany izy ireo."
Ny Fiarovana ara-tsosialy dia mbola iray amin'ireo programa New Deal tena malaza sy manan-danja indrindra. Getty Images / Moment / Douglas Sacha
Tamin'ny 1930, Amerikanina 6.6 tapitrisa no 65 taona no ho miakatra. Ny fisotroan-dronono dia saiky mitovy amin'ny fahantrana. Rehefa nihanihina ny taham-pahafatesana goavana ary nihena ny tahan'ny tsy fananan'asa, ny Filoha Roosevelt sy ireo mpiara-dia aminy tao amin'ny Kongresy dia nanaiky fa ilaina ny mametraka programa fandaharan'asa fandriam-pahalemana ho an'ireo zokiolona sy kilemaina. Tamin'ny 14 aogositra 1935, FDR no nanao sonia ny Lalàna momba ny fiarovana ara sosialy, mamorona izay lazaina ho fandaharan'asa fampihenana ny fahantrana mahomby amin'ny tantaran'i Etazonia.
Nandritra ny lalan'ny Lalàna momba ny fiarovana ara-tsosialy, ny governemanta Amerikana dia nanangana masoivoho mba hisoratra anarana olom-pirenena ho tombotsoa, ​​hanangona hetra amin'ny mpampiasa sy ny mpampiasa mba handoavana ny tombontsoa, ​​ary hanaparitaka izany vola izany ho an'ny tombotsoa. Ny fanampiana ara-tsosialy ihany no nanampy ny zokiolona, ​​fa ny jamba, ny tsy an'asa, ary ny ankizy miankina aminy .
Ny Fiarovana ara-tsosialy dia manome tombontsoa ho an'ireo 60 tapitrisa amerikana amin'izao fotoana izao, anisan'izany ireo zokiolona zokiny indrindra miisa 43 tapitrisa Na dia nanapa-kevitra ny hanaparitaka na handrava ny fiarovana ara-tsosialy nandritra ny taona vitsivitsy aza ny antoko sasany ao amin'ny kaongresy dia mbola anisan'ny fandaharan'asa vaovao vaovao malaza sy mahomby izy io.
Mbola mavitrika amin'izao fotoana izao ny Sampan-draharahan'ny Conservation Soisa, saingy nantsoina hoe Fanodinana ny harena voajanahary amin'ny taona 1994. Ny Departemanta momba ny fambolena amerikana
Efa teo am-pelantanan'ny Depression Lehibe ny Amerikana rehefa nihodina ny zava-drehetra. Ny hain-tany maharitra izay nanomboka tamin'ny taona 1932 dia nihorohoro teo amin'ny Great Plains. Nisy oram-baratra vovoka, nantsoina hoe Dust Bowl, nitondra ny tanin'ny faritra tamin'ny rivotra tany amin'ny tapaky ny taona 1930. Ny olana dia nentina ara-bakiteny tany amin'ny dingan'ny Kongresy, raha ny 1941 no nanangona ny volom-borona tany Washington, DC.
Tamin'ny 27 Aprily 1935, FDR dia nanao sonia ny lalàna manangana ny Saha Conservation Service (SCS) ho fandaharan'asan'ny Departemantan'ny fambolena amerikana. Ny iraka nomen'ny masoivoho dia ny handinihana sy hamaha ny olan'ny tany mandringana ny firenena. Ny SCS dia nanao fanadihadiana ary namolavola tetika fanamafisana ny tondradrano mba hisorohana ny tany tsy ho voasasa. Nametraka ihany koa ny famokarana landihazo izy ireo mba hamboly sy hizara masomboly sy zavamaniry ho an'ny asa fiarovana ny tany.
Tamin'ny taona 1937, nipoitra ilay fandaharam-potoana rehefa nanangana ny Lalàna momba ny fiarovana ny zon'ny fanjakana ny USDA. Rehefa nandeha ny fotoana dia niorina 3 000 mahery ny Conservation Conservation distrikana mba hanampy ny tantsaha hampivelatra drafitra sy fanao amin'ny fitandroana ny tany eo amin'ny taniny.
Nandritra ny fitantanan-draharahan'i Clinton tamin'ny 1994, dia nanangana ny USDA ny Kongresy ary nanova ny anarana hoe Service Conservation Soil mba hisaintsaina ny habaka lehibe kokoa. Amin'izao fotoana izao, ny sampan-draharaha miaro ny harena voajanahary (NRCS) dia mitazona biraon'ny sampana manerana ny firenena, miaraka amin'ny mpiasa miofana hanampiana ireo tompon-tany hampihatra ireo fomba amam-panao siantifika.
Fofomam-paty lehibe ho an'ny fosafosa izay ampiasaina mba hahatonga ny phosphorus elemental amin'ny orinasa TVA any amin'ny manodidina ny Muscle Shoals, Ala. Library of Congress / Alfred T. Palmer
Ny manam-pahefana ao amin'ny Tennessee Valley angamba no tantara mahagaga indrindra momba ny New Deal. Natsangana tamin'ny 18 May 1933 avy amin'ny Act of Tennessee Authority Act, ny TVA dia nahazo iraka sarotra saingy manan-danja. Ny mponina ao amin'ny faritra mahantra sy ambanivohitra dia tena nilaina mafy ny fitetezana ara-toekarena. Ny orinasan'ny orinasa tsy miankina dia tsy niraharaha io ampahany amin'ny firenena io, satria ny tombony bitika dia mety ho azon'ny tantsaha mifandray amin'ny orinasa marefo.
Ny TVA dia nanatontosa tetikasa maromaro mifantoka amin'ny renirano, izay nifandimby fanjakana fito. Ankoatra ny famokarana herinaratra ho an'ny faritra tsy voatsara, ny TVA dia nanamboatra tohodrano ho an'ny fanaraha-maso ny tondra-drano, nanamboatra ny dite ho an'ny fambolena, famerenana ny ala ary ny toeram-ponenan'ny biby an-tanety, ary ny tantsaha nahazo fanabeazana momba ny fifehezana ny fikajiana sy ny fanao hafa hanatsarana ny famokarana sakafo. Tao anatin'ny folo taona voalohany, ny TVA dia tohanan'ny Corps de la Conservation Conservation, izay nanangana toby 200 teo ho eo tao amin'io faritra io.
Raha nandona fandaharana New Deal ny maro rehefa niditra ny Ady Lehibe Faharoa i Etazonia, ny Tennessee Valley Authority dia nandray anjara lehibe teo amin'ny fahombiazan'ny tafika tao amin'ny firenena. Ny orinasa nitratera TVA dia namokatra fitaovana ho an'ny fiaramanidina. Ny sampan-draharahan'ny fandraketana dia namolavola ny sarintany ampiasain'ireo mpamonjy voina mandritra ny fampielezan-kevitra any Eoropa. Ary rehefa nanapa-kevitra ny hampandroso ny baomba atomika voalohany ny governemanta amerikana, dia nanangana ny tanànany miafina tany Tennessee izy ireo, izay ahafahany miditra amin'ny kilao an-tapitrisany novokarin'ny TVA.
Mbola manome fahefana ny olona maherin'ny 9 tapitrisa ny Manam-pahefana ao Tennessee, ary manara-maso ny famokarana herinaratra amin'ny angovo azo amin'ny angovo, ny angovo, ary ny angovo nokleary. Mbola mitoetra ho fanekena ny faharetan'ny Fira New Deal ny FDR.
"Lalàna Bankin'ny taona 1933 (Glass-Steagall)," tranonkala Federaly momba ny Tantara. Nahazoana alalana tamin'ny 27 Oktobra 2017.
"Ny FDIC: History of Confidence and Stability," fampirantiana an-tserasera amin'ny tranonkala Federal Deposit Insurance Corporation. Nahazoana alalana tamin'ny 27 Oktobra 2017.
"Ny Fandrosoan'ny Fandrosoana: Ny Tantarantsika," tranonkala Fannie Mae. Nahazoana alalana tamin'ny 27 Oktobra 2017.
"Tantara fohifohy an'i Fannie Mae sy Freddie Mac," Kate Pickert, tranonkalan'ny Time Magazine, 14 Jolay 2008. Averina an-tserasera 27 Oktobra 2017.
"Ny Tantarantsika," tranonkala National Relations Relations Board. Nahazoana alalana tamin'ny 27 Oktobra 2017.
"Izay ataonay," tranonkala US Securities and Exchange Commission. Nahazoana alalana tamin'ny 27 Oktobra 2017.
"Fanampiana ara-toekarena isan-taona, 2016," tranonkala fitondram-panjakana sosialy. Nahazoana alalana tamin'ny 27 Oktobra 2017.
"Mihoatra ny 80 taona ny fanampiana ny olona hanampy ny tany: Tantara fohy momba ny NRCS," tranonkala fampivoarana ny harena voajanahary USDA. Nahazoana alalana tamin'ny 27 Oktobra 2017.
"Miakatra ny ady ny TVA," tranonkala Tennessee Valley Authority. Nahazoana alalana tamin'ny 27 Oktobra 2017.
Tranonkala Living Deal. Nahazoana alalana tamin'ny 27 Oktobra 2017.
Top 5 ny antony mahatonga ny fahaketrahana lehibe
Tantara momba ny vono olona
Fanafihana izay nanentana ny "The Banner Star Spangled"
5 Facts About the Railcross Transcontinental
Ny ady tao Fort Niagara tamin'ny Ady Frantsay sy Indiana
Geronimo sy Fort Pickens
Ahoana no nampiova ny politikan'ny Foreign Foreign tao amin'ny Depression Lehibe?
The Strike Homestad Steel
Fanontana Classic avy amin'i Twain, Woolf, Orwell, ary More
Daty Tahaka ny Dinosauro!
Miverimberenà olana mikasika ny fihenan'ny fihenan'ny fihazakazahana
Famoahana sy famakiana teny amin'ny teny Espaniôla
Faux Amis manomboka amin'ny A
19 Fikarohana fikarohana ny fianakavianao ho an'ny fahalalahana
Jesosy dia nanasitrana tamin'ny Sabata, nitaraina ny Fariseo (Marka 3: 1-6)
Mercalli Tahan'ny Intel
4 Zavatra ho Fantarina Momba an'i Svetlana Khorkina
Top 10 Album Rock
Ny Ka'aba: lohahevitra momba ny fivavahana silamo
University of Illinois tao Chicago Photo Tour
University Admission Technologies University
MD5 manafina amin'ny Delphi
Eduardo San Juan, Mpamorona ny Moon Buggy
Ny Alahady Pentekosta sy ny Fiavian'ny Fanahy Masina
Tena misy ny Devoly!
Ny fomba hivavahana mba hahitana asa fahagagana
25 Ireo Zavatra Nafahana Very Very Amin'ny Fandikan-teny
10 Facts About Stegosaurus, ilay Spiked, Dinôzôra Plated
Antony dimy mahatonga ny Cricket tsy fanatanjahantena olaimpika
Inona no andrasana rehefa kansera ny volana?